Hurongwa hweBumbiro reMitemo Hunotadza Kusimuka Zvakanaka
Chikumi 23, 2010
Chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika chatadza kusimuka munzvimbo dzakawanda munyika nepamusana pekutadza kuronga hurongwa uhu kuri kuitwa nekomiti iri yeparamende iri kutangamira hurongwa uhu.
Vanhu vange vachifanirwa kunge vari kuMashonaland Central vachinzwa pfungwa dzevanhu mukunyorwa kwebumbiro idzva iri, vatadza kuenda kunzvimbo iyi nepamusana pezvipingaidzo zvakati kuti.
Zvinhu zvinonziwo hazvina kufamba sezvanga zvakatarisirwa kuMidlands sezvo chikwata chiri kupinda muvanhu, chaswera chisina zvachiri kuita. Zvinonzi chikwata ichi changa chisina midziyo yekushandisa. Izvi zvinonzi zvaitikawo kuMashonaland West, pamwe nedzimwe nzvimbo munyika.
KuMasvingo kunonzi dzimwe nhengo dzeparamende dziri kuti dzingangosiya basa iri sezvo zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Vanhu vakawanda vari kuchemawo nenyaya yekusapihwa mari dzekubatsirikana pazuva rega rega, zvekuti vamwe vari kurara nenzara nepamusana pekushaya mari.
Mumwe wevari kutungamira chikwata chekuMidlands, VaAmos Chibaya, vaudza Studio7 kuti vanotarisira kutanga basa ravo neChina.
Hurukuro naVaAmos Chibaya